SBC – Somali Broadcasting Coporation(SBC) » Ciidamada Amaanka Puntland oo Gaalkacyo ka wada Howlgalo Amaansugid ah
Ciidamada Amaanka Puntland oo Gaalkacyo ka wada Howlgalo Amaansugid ah
September 18, 2012 - Written by Webmaster - Edited byWebmaster Ciidamada Amaanka Puntland ayaa ka bilaabay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug howlgalo balaaran oo ay ku qabqabanayaan cid alaala cidii ay uga shakiyaan amaandaro gudaha Magaaladaasi .
Ciidamada looyaqaan daraawiishta Puntland iyo kuwa Dowlada hoose ee Magaaladaas ayaa badi saacadahii la soo dhaafay ka waday Magaalada howlgalo waaweyn oo ay sheegeen saraakiishoodu in amaanka magaalada lagu sugayo .
Waxay ciidamadu qabanayeen Cidkastaa oo ay uga shakiyaan amaan xumi waana ay kaxeysanayeen iyagoona ula dhaqaaqayay goobaha saldhigyada ah ee ay magaalada ku leeyihiin.
Xiliyada habeenkii ah ayaa siweyn loodareemaa howlgalada ciidamada iyadoo aad arki karto gaadiidkooda dagaal oo dhexjibaaxaya wadooyinka waaweyn ee magaalada .
“Waxay ciidamadu xiraan wadooyinka iyagoo roondeynaya waxaana ay ugaarsadaan gaadiidka leh bacaha madow ee looyaqaan Bersolka iyagoona islagoobta ugaga fiiqa” waxaa sidaasi yiri goobjooge ku sugan bartamaha maagalada xili uu la hadlayay xafiiska SBC ee Gaalkacyo.
Saraakiisha ciidamada ayaa iyagu idaacadaha ka sheegay in howlagalada amaanka lagu sugayo ay sii socondoonaan ayna qeyb ka yihiin ka shaqeynta nabadgeliyada gobolka .
Daalacatey :503 Leave a Reply Cancel reply